Raha araka ny vaovao azo dia hampanantsoina eny anivon’ny birao mahaleotena iadiana amin’ny kolikoly ( BIANCO) eny Ambohibao indray ny tenany anio talata 29 oktobra mba hanaovana fanadihadiana. Raha tsiahivina kely moa ny tantara dia lasana teratany karana ity kianjan’Anosizato ity izay toerana nilalaovan’ny mponina baolina teo aloha. Nifamahofaho be ihany ny zava-nitranga tao anatin’izany ka niafara tamin’ny fampidirana am-ponja an-dRafanomezantsoa Jean Nirina. Taorian’izay ity farany no nilaza fa tsy hiandraikitra ny resaka fiarovana ny zon’olombelona eo anivon’ny fikambanana misy azy intsony. Andrasana izay mety ho tohin’ny raharaha.